I-Metal Wall Divider ne-Sheet Metal Parts Factory - Abakhiqizi be-China Wall Wall & Sheet Metal Parts, abahlinzeki
Izikrini ze-SL-8014 Laser Sika Ubumfihlo Insimbi Engagqwali Yokuhlobisa Isikrini Sabahlukanisi Bensimu Yokuhlobisa Amaphethini we-Aluminium Metal Screen
Abahlukanisi bensimbi bakhiqizwa ngezindlela ezimbili ezihlukene. Enye ukusebenzisa ishubhu lensimbi lensimbi, enye indlela ukusebenzisa ipuleti lensimbi ukwenza ukusika kwe-laser. Uma ukhetha ithubhu yensimbi ongayenza, kudingeka futhi sicabangele ubukhulu.
Uma unesikhala esikhulu noma esivulekile sokuhlala, okwehlukanisa igumbi - okwaziwa nangokuthi ukwahlukanisa noma izikrini zeShoji - kuyindlela enhle futhi elula yokuhlukanisa noma yokuhlukanisa izigaba ezi-2 ezikuleso sikhala noma ukuhlinzeka nge-chic, iphoyinti lokugxila elingaphakathi igumbi. Ngenye indlela, abahlukanisi bamakamelo bangasetshenziselwa ukuhlinzeka indawo yangasese endaweni evulekile ngenye indlela, ukuvala indawo engafanelekile, noma ukuvikela umlilo ovulekile. Abahlukanisi abaningi bamagumbi banikeza isisombululo esilula ezinkingeni eziningi zasendlini, futhi babukeka njengama-grea
I-SL-8012 eqoshiwe Insimbi Engagqwali yesahlukanisi segumbi / umklamo wesikrini odongeni lokuhlobisa.
Sihlolisise lokho esikholelwa ukuthi ezinye zezinhlukaniso ezisezingeni eliphakeme kakhulu nezihlukanisa igumbi laphaya. Sithole izinciphisi zensimbi / izikrini zomlilo; Abahlukanisi begumbi lesitayela seShōji, Abahlukanisi begumbi lendabuko lamapulangwe, Abahlukanisi bamaGumbi Ezithombe Abahlukanisi begumbi eliqoshiwe. Uhlu lwethu luzokunikeza ugqozi nganoma yiluphi uhlobo lwekhaya.
Izikrini ze-Laser Sika Ubumfihlo Insimbi Engagqwali Yokuhlobisa odongeni Abahlukanisi ukwahlukanisa okuhlobisayo
Lesi sihlukanisi sodonga lwensimbi senziwe nge-laser cut ukuze kube nephethini enhle yama-rose, ukunambitheka okuhle kakhulu nokuthandana. bese kuba nombala we-PVD onombala wegolide wama-rose, nakanjani kube ucezu lomsebenzi wobuciko obuhle wendlu yakho.
Igumbi lokuhlala elingenalutho Igumbi lokulala iWall Wall Divider Metal Steel Partition Designs Indoor Decorative Laser Cut Screen Room Panels
Lesi sihlukanisi sodonga lwensimbi sihlanjululwe ngosayizi ohlukile wamashubhu wensimbi angenalutho, bese siqedwa ngaphezulu ngokuxubha nangombala we-matte, elula futhi mfushane.
Ngobuchwepheshe obuphezulu bokushisela ngamandla.
Ngenye indlela, lesi sehlukanisi segumbi singasetshenziswa ukuhlinzeka indawo yangasese endaweni evulekile ngenye indlela, ukuvala indawo engafanele noma ukuvikela indawo evulekile. Kuyinto ehlukahlukene kakhulu, abahlukanisi bamakamelo banikeza isisombululo esilula ezinkingeni eziningi zasendlini, nasekuhlobiseni!
Isimanje Esenziwe Ngezifiso Zokuhlobisa Insimbi Engagqwali
* Ukuhlangana okulula nokubukeka okuhle.
* Imiklamo yamaphethini iyatholakala.
* Yenza ngezifiso.
* Ukwenza izinto obala okuhle, ukubuyisela emuva nobulukhuni.
Igumbi lokuhlukanisa insimbi yesikrini sokuhlobisa iphaneli lensimbi engagqwali imfashini yesimanje igumbi lokuhlala ifenisha igumbi lehlukanisi
Lesi sihlukanisi sodonga lwensimbi sihlanjululwe ngamashubhu ayizicaba zensimbi, bese kuba yindawo eqediwe ngombala we-Vacuum ion, onemiklamo emihle yephethini yejometri, emfushane futhi evumelanayo.
Kuyaziwa impela egumbini lokuphumula lesimanje lesitayela noma ehhotela, ect.
Engagqwali ikheshi Handrail, Kuqondile Handrail Abakaki, Wokugibela Handrail Bracket, I-Handrail Base Plate, Izandla zokubopha, Insimbi Engagqwali Handrail,